Ngaba lo mfanekiso uyangqina ukuba isamsung galaxy note 7 ayinamanzi?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba lo mfanekiso uyangqina ukuba i-Samsung Galaxy Note 7 ayinamanzi?
I-Samsung Galaxy Qaphela i-7 inamahemuhemu okuba iqhubeke nenqanaba lokuqinisekiswa kwe-IP68. Oko kuthetha ukuba i-phablet kufuneka ikwazi ukumelana nokuntywila ukuya kuthi ga kwiinyawo ezintlanu zamanzi, ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30. Inqanaba elifanayo lokuxhathisa kwamanzi elifunyenwe kwi-Samsung Galaxy S7, kumda we-Samsung Galaxy S7 kunye ne-Samsung Galaxy S7 Active.
Akukho luhlobo lweGlass Qaphela eyakhe yanikezela ngokhuseleko emanzini, ke ukuba i-Samsung yongeze eli nqaku kunokuba yinto eyamkelekileyo yokongeza kumgca. Ukuza kuthi ga ngoku, ekuphela kwesibonakaliso sokuba i-Galaxy Note 7 ayinamanzi ivela eIndiya kunye neapos yokungenisa ngaphakathi kunye nokulandela umkhondo weTracker. Ekuqaleni kwale nyanga, Iteyiphu yeGlass Qaphela i-7 & apos; iglasi yangasemva engenamanzi yathunyelwa eIndiya ovela eMzantsi Korea.
Namhlanje, kwafunyanwa umfanekiso ku-Weibo ekuthiwa ubonakalisa ukuba i-Galaxy Note 7 icocwa ngesepha namanzi. Kuyabonakala ukuba isixhobo esikulo mfanekiso sinomboniso ombini odibeneyo, nangona ukugxila okuthambileyo kunye nesepha kusithintela ekufumaneni 'ukucoceka' kwifowuni esemfanekisweni (akukho pun ejoliswe kuyo).
Siya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba i-Galaxy Qaphela i-7 inenqanaba lokuqinisekiswa kwe-IP68 nge-2 ka-Agasti . Kulapho i-handset kulindeleke ukuba ityhilwe ngexesha lomsitho olandelayo we-Samsung Unpacked.
I-Samsung Galaxy Qaphela i-7 iya kuthi ibe yeyokuqala engenawo amanzi kwi-Galaxy Qaphela phablet
umthombo: Weibo nge Ukudlala
lg isitayile 4 Android 9
Ikhamera ye-lg v20 vs s7
Isamsung Pay ngoku inokwenza into e-US ukuba iApple Pay kunye neGoogle Pay zinakho & apos; t
Yenza isilumkiso! Intlawulo yeFitbit i-HR isiya kwi- $ 84.99 nje kwi-eBay okwangoku, iipesenti ezingama-43 ishiye amaxabiso ayo
Isivumelwano: I-AT & T ibonelela nge-iPhone SE nge-49,9 yeedola kuphela kuhlawulwa kwangaphambili